Myanmar OA6: MBA သတင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 3:53 PM
ကိုပွတ်ရေ ကျွန်တော် သိပ်နေမကောင်းလို့ မလာလိုက်နိုင်ဘူးဗျာ။ ဆွေးနွေးထားတာတွေ ကောင်းတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ဒီသတင်းကို စောင့်ဖတ်နေတာဗျ. ခဏခဏလာကြည့်ဖြစ်တယ်. ခုမှပဲတွေ့တော့တယ်.
သိပ်ကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါပဲဗျာ. ကျွန်တော်အကြမ်းလုပ်ထားတဲ့ MBA Blog မှာ ပြန်လည်ဖော်ပြခွင့်ပြုပါ. မြန်မာဘလော့ဂါဖိုရမ်ကို portal ထဲမှာ ပါဝင်လာနိုင်အောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပေးပါမယ်.
Domain ၀ယ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တာတွေကိုလည်း အကြမ်းဖျင်းကုန်ကျစရိတ် တွက်ပြစေချင်ပါတယ်.
ဒီပို့စ်ကို ဖေါ်ပြတဲ့ မောင်ပွတ်ရေ Good Job and well done ပါ။
တခုထပ်ဖြည့် ရင်ကောင်းမလားလို့ (just reminding naw)
“ကိုယ့် Post သာ တကယ်ကောင်းမယ်ဆိုရင် အရင်ရနေကျ Hit ထက် များစွာပိုရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးကိတ်စ ညစ်ညမ်းစာသား ပါဝင်မှုကိတ်စတွေကိုလဲ ADMIN မျာကအနည်းအကျဉ်း ပြင်ဆင်ဖေါ်ပြတာကလွဲလို့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးသည် ဘလော့ ပိုင်ရှင်၏ အပေါ်တွင် လွတ်လပ်စွာအကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်”
ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ တခုဖေါ်ပြဖို့ ကျန်နေသေးသလားလို့